KosmoTime: Mamorona asa izay mitahiry fotoana amin'ny kalandrie | Martech Zone
Amin'ny maha mpiara-miasa ao amin'ny masoivoho miasa miaraka amin'ny orinasam-pandraharahana, manjary manjavozavo ny androko ary mikorontana ny kalandrie ataoko - manomboka amin'ny varotra, hatrany amin'ny paikady, amin'ny fijoroana, amin'ny fiaraha-miombon'antoka ary amin'ny fivorian'ny mpiara-miombon'antoka tsy tapaka. Eo anelanelan'ny antso rehetra ireo dia mila ataoko tokoa ny asa nanolorako tena tamin'ny mpanjifa koa!
Ny zavatra iray nataoko manokana taloha dia tsotra voasakana ny fotoana amin'ny kalandrie mba hahazoana antoka fa afaka mahavita ny asako aho ary ampitaina amin'ny mpanjifanay. Rehefa tonga ny sakana ataoko, dia mijery ny taratasy itokisako aho ary manomboka mandondona ireo asa miavaka.
Fitantanana fotoana KosmoTime
KosmoTime dia fampiharana fitantanana fotoana iray izay manampy ny matihanina hamita ny asany amin'ny alàlan'ny fametrahana lahasa amin'ny kalandrie miaraka amin'ireo fiasa fanakanana mandeha ho azy. KosmoTime no rohy tsy hita eo anelanelan'ny fanatanterahana ny asanao, ny fampifanarahana an'izany amin'ny kalandrie ary ny fiantohana fa tsy misy ny fanelingelenana eo am-panatanterahana azy ireo.
Afatory ny asanao - Ny dingana matetika dia dingana bitika mankany amin'ny tetikasa lehibe kokoa. KosmoTime dia ahafahanao manangona ireo asanao ary avy eo mandahatra fotoana mba hahazoana antoka fa ho vita ilay tetikasa.
Sakano ny fanelingelenana rehetra - KosmoTime dia manidy ny tabanao ary mamono ny fampandrenesanao Slack rehefa manomboka ny asanao ianao. Raha vantany vao vita ianao, KosmoTime dia hanokatra ny safidinao sy ny fampandrenesana rehetra
Manampia Task avy amin'ny Chrome - KosmoTime dia mamela anao hametaka ny URL rehetra ary mamadika azy ho Task amin'ny tsindry iray avy eo Google Chrome. Azonao atao ny manendry azy amin'ny Sprint avy eo ary manao azy amin'ny fotoana mety, amin'ny fifantohana tsara.
Tehirizo ny kalandrieo - KosmoTime dia miharo mivantana amin'ny kalandrie Microsoft na Google anao. Manampia lahasa na sakana iray, apetaho ao anaty kalandrie, ary azonao atao ny manitatra ny fotoana hanakanana fotoana betsaka araka izay ilainao mba hahatanteraka ny asanao.
Ny tanjon'i KosmoTime dia ny hahafahan'ny mpampiasa manatratra ny fahafaha-mamokatra feno, ary ao anatin'izany dia haverina ny fanaraha-maso ny fotoanany sy ny fahatsapany fahalalahana. S
Midira ao amin'ny KosmoTime
Tags: marketing marketingGooglekosmotimeMicrosoftfitantanana asaasa mpitantana